Dowlada Soomaaliya iyo Talyaaniga oo heshiis kala saxiixday - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Dowlada Soomaaliya iyo Talyaaniga oo heshiis kala saxiixday
Dowlada Soomaaliya iyo Talyaaniga oo heshiis kala saxiixday
Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Dowlada Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiiska mashruuc cusub oo isugu jira dhisme biyo xireen, dayactirka Jiinka iyo kanaalada wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne. Ujeedka mashruucan ayaa ah sidii loo yarayn lahaa khatarta fatahaada ee webiga Shabeelle oo dhibaato weyn ku haya beeralayda iyo dadka degan magaalada Beledweyne.
Mashruucan oo ay ku baxayso 6 milyan oo Euro ayaa waxa kala saxiixday siihayaha wasiirka Beeraha Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid, Safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto Vecchi iyo Madaxa Hay’adda horumarinta Talyaaniga Guglielmo Giordano, waxaana goobjoog ahaa siihayaha raysal wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed.
Previous articleCiidamada NISA oo caawa xabsiga dhigay weriye Cabdullaahi Kulmiye
Next articleShirkada DP World oo ka hadashay heshiiska Carabta Iyo Israa’iil